AmaNqanaba aHlukeneyo, ixesha kwiSiza kunye nokuKhangelwa kweMicimbi | Martech Zone
AmaNqanaba aHlukeneyo, ixesha kwiSiza kunye nokuKhangelwa kweMicimbi
NgoLwesithathu, Oktobha 12, 2011 NgoLwesihlanu, ngoJuni 13, 2014 Douglas Karr
Kusekho ukungaqondani okuninzi kwe- Inkcazo yezinga lokuhlawula, ukuba nefuthe elibi kangakanani kwindawo yakho, kwaye ungasebenza njani ukuyiphucula. Kuba uninzi lwakho lusebenzisa uhlalutyo lukaGoogle, ukuqonda indlela uGoogle ayiphatha ngayo i-bounce kubalulekile.
Okokuqala, unokungayiqondi kodwa Ixesha eliPhakathi kwiSiza kuba abatyeleli abakhenkethi bahlala belingana no-zero. Ngamanye amagama, njengoko ujonge Ixesha eliPhakathi kwiSiza, ibonisa kuphela ixesha elichithwe kwindawo yakho kwabo ndwendwe sukubhampiza. Oko kubonakala kuyinto engaqhelekanga kum. Ndingathanda ukwazi ukuba abantu bahlala ixesha elingakanani ngaphambi kokuba bahlasele ukuze babone ukuba ubuncinci bufaka ingqalelo yabo. Ngelishwa, akunakwenzeka ngaphandle kwee-hacks ezithile. Zivavanye ngokwakho ... umfanekiso apha ubonakalisa ingxelo efihliweyo kubatyeleli kuphela ... okukhokelela kwisiphumo se- Ixesha eliPhakathi kwiSiza 0.
Into enomdla kukuba, ukuba undwendwe lwakho lunxibelelana nephepha lakho kwi nayiphi na indlela enokulandeleka (ngaphandle kokushiya), abahlelwa njenge bounce! Ke… ukuba uyadibanisa ukulandelwa komsitho kwiqhosha lokudlala okanye umnxeba wentshukumo, kwaye umntu ucofe… ahlelwa njengebhampi. Uninzi lwabantu lucinga ukuba i-bounce nguwo nawuphina umntu ofike kwindawo yakho emva koko wemka. Akunjalo… nabani na ohlala kwindawo yakho, enganxibelelanisi nangayiphi na indlela, emva koko ahambe.
Ukuba ulandelela imicimbi okanye ukujonga iphepha elongezelelweyo kwiphepha, loo mntu ubuchwephesha Khange abambe. Ke ukuba ungumphathi wentengiso osokolayo ngamazinga aphezulu okuhlawula, kuya kufuneka ubuncinci ubone ukuba iindwendwe zinxibelelana nendawo yakho nangayiphi na indlela ngaphambi kokuba zihambe. Oku kunokufezekiswa ngokongeza umkhondo womsitho naphi na apho kunokwenzeka.
Cinga ngezinto zephepha apho unakho NONE:
Ukuba unamakhonkco kwiphepha lakho oko ukuqhuba ukugcwala kwabantu ngaphandle ngenjongo, unokufuna ukulandela umkhondo wesiganeko. Ifuna ikhowudi encinci, nangona kunjalo, ukuqinisekisa ukuba umsitho uyabanjwa ngaphambi kokuba ushiye iphepha.
Ukuba unayo Indawo enikwe i-jQuery ngolawulo lweendwendwe ezinxibelelana nezilayida okanye ezinye izinto, ungongeza ifayile ye jQuery Uhlalutyo lukaGoogle iplagi eyenza ukuba kube lula ukulandela umkhondo kwimisitho.
Olunye ukhetho oluphambili kukudibanisa Isibini Iakhawunti kaGoogle yokuHlola kwiphepha lakho kunye nokujonga umkhondo wephepha lesibini kwangoko xa iphepha lilayisha. Oku kuya kunciphisa ireyithi yakho yokuhla uye ku-0 kuloo akhawunti kodwa iya kukubonelela nge-avareji yexesha kubalo lwendawo kuzo zonke iindwendwe. Emva koko unokongeza icandelo ngesihluzi esingaphantsi kwesi-3 sokujonga iphepha. Oko kuyakucoca nabani na ongakhange abambe kwaye akunike ixesha kwidatha yesiza.
Kwaye ungalibali ukwenza njalo umkhondo wokurhweba ngamanani amaxabiso ukubona ukuba indawo yakho ithelekiswa njani. Inqaku elinye-sihlala sibona iisayithi ezinesikhundla sokukhangela kwindawo ephezulu kakhulu. Ukuziphatha kwabatyeleli kwabo bavela kuphendlo bathambekele ekubonakaliseni ngakumbi imisebenzi yokukhangela apho bejonga khona iziphumo zokukhangela kunye nokushiya emva kokufumana umfanekiso okhawulezileyo wephepha. Ke ungothusi ukuba ubamba ukugcwala kwitrafikhi engaphezulu kwaye inqanaba lakho lokunyuka liya kunyuka!
tags: izinga lokuhlawulaukulandelwa komsithoi-google analyticsixesha kwisiza
Musa ukuthoba isaphulelo semveli kwi-PR